स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने आमजनताको चाहना छ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने आमजनताको चाहना छ
स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने आमजनताको चाहना छ (गजुरियल विश्लेषण) एउटा झुर प्रश्न : चुनाव हुन्छ त ? झन्डै दुई दशकपछि हुन लागेको चुनावलाई जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ । शान्ति र स्थिरताका लागि पनि चुनाव आवश्यक छ ।
चाल्र्स शोभराजको मनोविज्ञान राम्रोसँग बुझेर लेखेजस्तो लाग्यो (अन्तरवार्ता : चाल्र्स शोभराज भन्छन्, हाम्रो प्रेम खहरे खोला होइन) । अप्रिल फुल विशेष भए पनि मीठो प्रस्तुति र पठनीय सामग्री।
रामकृष्ण ढकालको रोजाइ जान्न पाइयो (मलाई मन पर्छ : रामकृष्ण ढकाललाई मन पर्ने सवारी) गाडीबाहेक अरू विषयमा पनि जानकारी दिनुपर्‍यो ।
एप्पलले सामाजिक सेवाका लागि गरेको काम सराहनीय छ (एप्पलले किन निकाल्यो रातो आईफोन)। अन्य ठूला कम्पनीहरू पनि सामाजिक सेवामा उदाहरणीय हुनुपर्‍यो ।
ई–बैंकिङले गर्दा समय बचत हुन्छ (बढ्दैछ ई–बैंकिङप्रतिको आकर्षण) लाइन बसिरहनुपर्ने झन्झट पनि हँुदैन । सबै किसिमका सेवा ई–बैंकिङबाटै लिन सकिने भएकाले पनि यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको हो ।
धुर्मुस–सुन्तलीले नमुना काम गरेका छन् (धुर्मुस–सुन्तलीको मुसहर बस्ती) । हाम्रो देशका जनता, नेता एवं कार्यकर्ताहरूमा यस्तै भावना पलाउने हो भने देशको मुहार फेर्न धेरै समय नलाग्ला ।
यति ठूलो कार्यक्रम गर्नु नै ठूलो कुरा हो (ग्यालरी: काठमाडौं ट्रिएनाले) । देशलाई चिनाउने कला, साहित्य तथा रंगमञ्चका कार्यक्रमहरूले पनि हो ।
बधाई छ (सुष्मा मिसेज चितवन) । आगामी प्रतियोगिताहरूमा पनि जित हात पार्नुहोला ।
नयाँ वर्षमा पोखरा र चितवनबाहेक अन्य स्थान पनि पुग्न सकिन्छ (नेपाली नयाँ वर्षमा पोखरा) । साप्ताहिकमा ओझेल परेका ठाउँहरू पनि अटाउनुपर्‍यो ।
राजपाल यादवलाई दौरा–सुरुवाल निकै सुहाउने रै’छ (दौरा–सुरुवालमा राजपाल) । पक्कै उनले अभिनय गरेको करोडपति धेरैले रुचाउनेछन् ।
नेपालमा घुम्न लायक ठाउँ प्रशस्तै छन् (डेस्टिनेसन : न्यू इयर– २०७४० । अन्य ठाउँलाई पनि यसरी नै स्थान दिनुपर्‍यो ।
साप्ताहिकको गत अंक राम्रो लाग्यो । सधैं रोचक सामग्री पढ्न पाइयोस् ।
सेलिब्रेटीले गफ दिएका हुन् कि पत्रकारले नबुझेका (घरमा खासै खान्नँ स् नम्रता सापकोटा, अभिनेत्री) रु घरको खाना नखाने, पिज्जा बाँडेर खाने, बटर नखाने बिस्कुट खाने ? सन्तुलित आहार त्यस्तो ?
सविता थापा, नैरोवि
स्वस्तिमा र सुरजको प्रश्नोत्तर रोचक लाग्यो ९हाम्रो जोडी स: अभिनेत्रीको प्रश्न : अभिनेताको जवाफ । स्वस्तिमा र सुरजको केमेस्ट्री गजबको रहेछ ।
मुलुकबाहिर यस्ता कार्यक्रम हुनु सुखद कुरा हो । ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीहरूले सानो सानो सहयोग पुर्‍याउँदा स्वदेशमा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ ।